Rivomahery Ivan : Ny tsy fahampian’ny rano madio fisotro no olana goavana voalohany indrindra – i am a malagasy in genève
26 février 2008 9 avril 2009
Rivomahery Ivan : Ny tsy fahampian’ny rano madio fisotro no olana goavana voalohany indrindra
« Toa-rano », sary nadika tamin’i Aérobrush >>
Araky ny tatitra nataon’ny tompon’andraikitra, vokatry ny fandalovan’ny rivomahery Ivan sy ny fampitahana amin’izay zavatra efa hita tamin’ny fidònan’ny voina toy itony dia mazava fa ny rano madio fisotro no olana goavana voalohany indrindra. Efa nambara teto ihany fa ireo ankizy no loha-laharana amin’ireo tandindomin-doza anefa dia mazava fa ireo mpianakavy iray manontolo no indray hitondra faisana vokatr’izany arak’ireo feo voaray :
« Efa mihanaka any amin’ireo faritra tondraka, izany hoe any amin’ny faritra izay tsy ahitana rano madio fisotro intsony toa an’i Vavatenina, Alaora, Toamasina sy Antananarivo, ny fivalanàna sy izay aretina hafa vokatry ny fampiasana [fisotro, fisasa, fahandro] rano voaloto.
“Anefa dia mahatratra 90’000 sady manerana ny nosy, ny isan’ireo olona izay mety ho tratran’ireny aretina ireny” araky ny vinavinan’ny Kôlônely Rakotomalala Jean, secrétaire exécutif-n’ny BNGRC >>. »
[Maladies hydriques, près de 90 000 personnes menacées – midi-madagasikara.mg – 25.02.08 >>]
I Avyalavitra no mitatitra kosa izay hitany :
« Ny tena loza dia ity: tsy hitako teny hoe aiza izy ireo [tsy manan-kialofana ao Anosizato Andrefana] no mivoaka sy midio. Olona sendra nanontaniako teo an-toby no nilaza fa dia eny amin’ny takontakona eny no manao fa tsy maharaka ny foto-drafitrasa momba izany. Eo koa ny fampiasàn’izy ireo ny rano avy amin’ny tanimbary eo akaiky eo amin’ny fiainana andavanandro. Na hidiovana sy hanasana lamba izany , na hanaovana sakafo. »
[Tra-boina ao Anosizato Andrefana – gazetyavylavitra.wordpress.com – 25.02.08 >>]
Mbola sahala amin’izany koa no hita teny Tanjombato :
« Lavitra ny toby [eny Tanjombato] misy ireo tra-boina ny paompy fatsakana ka dia mampiasa ny ranon’Ikopa ry zareo hoan’izay ilany rano amin’ny fiainana andavan’andro […] Mizohy ny lalankely mikarao-bato mitondra eny ampototry ny “digue” akaikin’ny tetezan’ny “galerie Smart” ry zareo rehefa hanasa lamba. Mbola izany làlana izany ihany no arahiny rehefa matsaka handrahoam-bary, na koa rehefa hisasa sy handro.
“Vizaka izahay matsaka ery amin’ny paompy izay lavitra anay. Izany no ampiasanay ny ranon’Ikopa hoan’izay ilainay amin’ny fiainana andavan’andro”»
Na dia ny ranon’ny JIRAMA izay heverina ho tokony fisotro madio aza dia mampiahiahy ireo mpanjifa, hoy indrindra i news2dago manontany tena :
« Asa ianareo raha mahatsikaritra fa ohatran’ny maloto be ny rano @ paompy izao! io aloa mety tsy mahagaga fa noho ny fiakaran’ny rano manodidina an’i mandroseza angamba! fa ilay izy tena mitovy @ ranom-potaka no tena maha sadaikatra indraindray oe azo sotroina ve ity sa ahoana? »
Novalian’i Tokinao hoe :
« araka ny hevitro dia tokony hanao filazàna @ haino aman-jery zareo JIRAMA momba ny rano avoakany. Ohatra ny hoe : fialan-tsiny, fanantitranterana hoe : mila ampangotrahina sy tsifina tsara ny rano vao azo sotroina, sns. »
Manamarika kosa i istraky sady miantso fahamalinàna :
« Toa hoe efa nampilaza ihany hono ry zareo any @ gazety any. Tsy mankarary hono izy io fa ny lokony fotsiny no somary hafa(…). Izany hoe aleo mitandrina ihany sao io no hinanana (hisotroana mantsy e) ny tsy fisotro eo… »
[Maloto be ny ranon’ny JIRAMA ! – news2dago.blaogy.com – 23.02.08 >>]
Amin’ny fotoana toy izao vao tena tsapa tokoa fa “fitandrovana ny aina ny fiarovana ny rano.” Tena mampalahelo raha izay manjo ny Malagasy mikasika ny rano, tsy tambo ireo izay efa tsy manan-kialofana izay tsy mahazo rano avy amin’ny JIRAMA ka voatery midina eny an-tanimbary sy eny an-drenirano, hatramin’ny mpanjifa indray no “miala amin’ny delestazy, dia miditra amin’ny rano mavo.” 😦
7 réflexions sur “Rivomahery Ivan : Ny tsy fahampian’ny rano madio fisotro no olana goavana voalohany indrindra”
26 février 2008 à 17:04
FANAMPIM-BAOVAO : tafakatra 60 ny isan’ireo olona namoy ny ainy tamin’ny fandalovan’ny rivomahery Ivan.
26 février 2008 à 19:12
tena henjana ny tantara e! io efa voalazako teto @ tontolo ny blaogy oe na ny rano @ paompy aza oa maloto tao aoriana iny rivodoza iny!
moa ny malagasy ihany koa somary voredretra izay ihany ka tena hatahorana ny valan’aretina!
dia entina am-bavaka izy ihany no azo iatorahana rhf sahirana oh io
Misaotra anao nampahatsiahy ahy iny lahatsoratrao iny. Satria marina fa tsy ireo tsy manan-kialofana irery ihany tokoa, fa samy mitondra takaitra avokoa ny fiaraha-monina iray manontolo 😦
28 février 2008 à 07:45
Efa niverina amin’ny laoniny aloha ny lokon’ny rano JIRAMA e! Tsy niasa ny milina fampiakarandrano sasany ary teo koa ny fiakaran’ny renirano sy ny loto niaraka taminy, hoy zareo. Fa ity resaka rano ity no mbola hitako hatreto fa tsy mbola tena nivaha tanterka eny amin’ny ankabeazan’ny toby mba voatsidiko. Nandalo teny Ambohimanambola, Anosizato Andrefana, Tanjombato aho, fa mbola maro ny olona no misotro renirano. Misy anefa ny fatim-biby entin’io renirano io, ary mety hiteraka zava-doza tokoa.
28 février 2008 à 08:38
Faly mandray anao eto Avyalavitra sady manararotra misaotra anao amin’ireo sary sy tatitra nataonao 😀
Tsara izany vaovaon’ny JIRAMA izany, ary antenaina hivaha tsy ho ela ny mikasika ireo tsy manan-kialofana any amin’ireo toby.
← Rivomahery Ivan : zaza Malagasy tra-boina miisa 15’000 no mila vonjy maika
Rivomahery Ivan : Manangasanga sahady ny kere →